မေးပါရစေ လ၀က က တာဝန်ရှိသူတွေကို ၊ ခင်ဗျားတို့၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ နိင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့၁ သန်း နီးပါး တ၇ုတ်တွေကို အခုပြန်စစ် ရဲ ပါသလား? | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeမေးပါရစေ လ၀က က တာဝန်ရှိသူတွေကို ၊ ခင်ဗျားတို့၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ နိင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့၁ သန်း နီးပါး တ၇ုတ်တွေကို အခုပြန်စစ် ရဲ ပါသလား?
မေးပါရစေ လ၀က က တာဝန်ရှိသူတွေကို ၊ ခင်ဗျားတို့၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ နိင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့၁ သန်း နီးပါး တ၇ုတ်တွေကို အခုပြန်စစ် ရဲ ပါသလား?
May 4, 2017 drkokogyi
လ၀က က တာဝန်ရှိ သူက ပြောသွားတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာ ပြည်မှာ စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ တရုတ် တွေကို နိုင်ငံသားကဒ် ထုတ်မပေးပါဘူးတဲ့ ။ အခု အထိ ထုတ်ပေးနေလို့ ရှိ ယင်လဲ လ၀က ဌာန တစ်ခုလုံးထောင်ထဲသာ
ထည့် လိုက်ဖို့ ကောင်းပါတော့ တယ်။ အယင် က မန်းလေး ရန်ကုန်မှာ စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ တရုတ်တွေကတော့ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ရှိပြီးသားတွေပါတဲ ။ မေးပါရစေ လ၀က က တာဝန်ရှိသူတွေကို ၊ ခင်ဗျားတို့၁၉၈၈
နောက်ပိုင်းမှာ နိင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ တ၇ုတ်တွေကို အခုပြန်စစ် ရဲ ပါသလား ။ အနည်းဆုံး ၁ သန်း နီးပါးရှိ နေတယ်။ တရားမ၀င် တရုတ်တွေကို တရားဝင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ တာ ခင်ဗျားတို့ လ၀ကဘဲ။ မှတ်ပုံတင် တခုကို သိန်း ၂၀ ပေါက်ဈေးနဲ့ လုပ်ပေးခဲ့ကြတာ။
တယ် ကိုးကန့်နဲ့တရုတ်ကို ခွဲ ခြားသိပါတဲ့။ ခင်ဗျား သမိုင်းမသင်ဖူးဘူးလား။
ကိုးကန့် ဆိုတာ လဲ တရတ်ဘဲ။ တရုတ်နန်တွင်း ပြသနာကြောင့် မြန်မာ
ပြည်ကိုပြေးလာပြီး ကိုးကန့် ဖြစ်သွားတာ။ ဘယ် သကောင့် သားက တိုင်း
၇င်းသားလုပ်ပေးလိုက်တယ် မသိဘူး။ ခိုင်လုံတဲ့သတင်းတွေ အရကတော့ 
စစ်တပ်ခေတ်မှာ ကိုးကန့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုအကြောင်းပြု ပြီး တရုတ် လူမျိုး
သိန်းချီ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ရသွားကြတယ်။ စစ်ထောက်လှမ်း
ရေးရဲ့ တရုတ်အဖေခေါ် တဲ့ လမ်းစဉ်အောင်မြင်ပုံပါ။ ကိုးကန့် တွေကို မှတ်
ပုံတင်တွေလုပ်ပေးတော့ လ၀က တွေက ဘာမှ စစ်ဆေးခြင်းမရှိ ပါ။ နေရပ်
လိပ်စာပြောတာ နဲ့ မှတ် ပုံတင် လုပ်ပေးခဲ့ တာပါ။ တရုတ်ပြည်ဖက်က တ
ရုတ်တွေက က အဲဒီအချိန်မှာ ကိုးကန့် အမည် တပ်ပြီး မှတ် ပုံတင်တွေ လုပ်
လက်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ ညီမညီကို ၁၉၈၈ က
နေ ယခုထိ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ တရုတ်၊ကုလား နဲ့
နိုင်ငံခြားသားအားလုံးကို ပြန်လည် စစ်ဆေး ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ ။လ၀က ဟာ
လက်၇ှိ အချိန်မှာ မြန်မာ ပြည်ရဲ့ အကြီးဆုံး ဖောက်ပြန် ရေး ဌာန ဖြစ်နေပါ
တယ်။ ဒါကို အချိန်မှီ ပြု ပြင်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ လက်ရှိ လ၀က ၀န်ကြီး
ဟာလည်း စစ်တပ် က မိုးကျ ရွှေကိုယ် ဖြစ်တာကြောင့် တရုတ် တွေတရားမ
၀င်နေထိုင်တာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ အသံမထွက်ရဲ ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ စစ်တပ်
က အဘမှန်ယင် တရုတ် ကြောက်တာ မြန်မာ ပြည်မှာ ယဉ်ကျေး မှု တခုလို
ဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ ။ လက်ရှိ အာဆီ ယံ နိုင်ငံတွေမှာ မြန်မာ ဟာ တရုတ် လူမျိုးအခြေ ချ နေထိုင်မှု တတိယ အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာ
ပြည်မှာ တရားဝင် တရားမ၀င် တရုတ် လူမျိုး၃ သန်း ခန့်ရှိ နေပြီဖြစ်ပါတယ်
လ၀က အနေနဲ့ မုန်းဝန်းဗမာ ဆိုတဲ့ တရုတ် လူမျိုး ကို မြန်မာ တိုင်းရင်းသား
ဖြစ်ရေး လိမ်လည်မှု မှာ လည်း ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ တာက ပြည်သူ လူထု ရဲ့ 
မယုံ ကြည်မှု ကို ပိုမို တိုးပွားစေပါတယ်။ လက်ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ကချင်ပြည်
နယ် မှာ ရှိ တဲ့ စစ်တပ်လက်ဝေခံ ပြည်သူ့ စစ်တွေ ရဲ့ တပ်သားတွေ မှာ
တရားမ၀င် တ၇ုတ် တွေ အမှုထမ်းနေကြပါတယ်။ တရသ လက်နက် ကိုင်
ဖြစ်တဲ့ ကိုးကန့်နဲ့ဝ တပ်ဖွဲ့ တွေထဲမှာလည်း တရား မ၀င် တရုတ်တွေ စစ်
မှု ထမ်းလျက် ၇ှိ နေကြပါတယ်။ ဒါကနှစ်ဖက်လုံးမှာတာဝန်ရှိ ပါတယ်။ အမျိုး
သားရေး ရောင်းစားခံ နေရတဲ့ သဘောပါဘဲ။
လ၀က အနေနဲ့ လက်ရှိ အချိန်အထိ ရန်ကုန် မန်းလေးလို မြို့ ကြီးတွေ
မှာ တရုတ် လူမျိုးတွေ တရားမ၀င်နေထိုင်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်နေတာ
တွေကို မဟန့်တားနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါဟာ စိုးရိမ်စရာအခြေအ
နေပါ။ တရုတ်ကွန်မြူ နစ်ပါတီ ဟာ လက်ရှိ နောက်ဆုံး ကိုလိုနီ ပြု ရေး ဗျူ
ဟာ ဖြစ်တဲ့ လူမျိုးရေးအခြေချ တိုးပွားအောင်လုပ်ရေး နည်းစနစ်ကို အား
ပေးလျက်ရှိ ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က တရုတ် ခရို နီ အများစု ဟာ သူတို့ ရဲ့ 
ချမ်းသာကြွယ်ဝ မှု တွေကို မြန်မာ နိင်ငံအတွက် အသုံးမပြု ဘဲ မိခင် တရုတ်
ပြည်အတွက် သာ အသုံးပြု နေတာပါ။ လက်ရှိ မြန်မာ ပြည်မှာ နေထိုင် ပြီး
ကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့ တရုတ် တွေဟာ တရုတ် အစိုးရကို သာ သူတို့ အစိုးရ
အဖြစ်မှတ် ယူထားနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုး၇အနေနဲ့ ပိုင်
ဆိုင်မှုတွေ ရွှေ့ ပြောင်းမှု မှာ ဥပဒေနဲ့ ညီမညီ ကို သေချာစွာစစ်ဆေး ဖို့ လို
အပ်နေပါတယ်။ ပြည်ထဲေ၇းနဲ့ လ၀က မှာတာဝန် အရှိ ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
← Burma did not agree to divorce from India 80 years ago but it was separated against its will from Kalars by the British colonialists
DASSK ၁၈ ရာစုလို့ မပြောခဲ့ဘူးဆိုပြီး ငြင်းနေသူများအတွက် Daw Suu confirmed that Rohingyas were in Burma since 18 century →